Sunday September 26, 2021 - 17:44:21
warsaxaafadeed kasoo baxay jeyshka Suudaan ayaa lagu sheegay in ay iska caabiyeen isku day ay ciidamada Itoobiyaanka ku doonayeen in ay dib ugu qabsadaan deegaanno katirsan alfashaqah oo sanaddii lasoo dhaafay laga xureeyay maleeshiyaad amxaaro ah.
Jenaraal Aldaahir Abuu Haaja oo ah taliyaha guud ee ciidamada melleetriga Suudaan ayaa usheegay wakaaladda wararka Al-anaadool in ciidamadoodu ay si adag isaga caabiyeen duullaan uga yimid melleetriga xabashida.
ciidamada Itoobiya ayaa soo galay tuulada Umu Baraakiit ee mandiqadda alfashaqah balse dib ayaa looga caabiyay sida ay xaqiijiyeen mas'uuliyiin suudaaniyiin ah.
"ciidamada Itoobiya ayaa xoog kusoo galay aagga umu baraakiit balse waxaan ku qasabnay in ay dib unoqdaan" ayuu yiri taliyaha ciidanka xoogga suudaan.
Mas'uulkan suudaaniga ah ayaa intaas ku daray in marnaba aysan ogolaan doonin in ciidamada itoobiya ay dib uqabsadaan dhulka alfashaqah ee hodonka ku ah beerashada khudaarta iyo daafida oo il dhaqaale u ahaa malaayiin ruux amxaaro xabashi ah.
in mudda ah ayay qulqulatooyin amni iyo kuwa siyaasadeed ka socdeen mandiqaddan balse melleteriga suudaan ayaa 31 decembar ee sanadkii tagay ku dhawaaqay in ay si buuxda ula wareegeen alfashaqah oo waxbadan 25 sanadood ay xoog ku haysteen maleeshiyaad amxaara ah kadib markii ay barakiciyeen qoysaskii muslimiinta suudaan ee deganaa.